पटक पटक जिन्दगीमा धोका पाएकी नायिका शिल्पा पोखरेलको फेरी आयो विबाहको कुरा – Gazabkonews
पटक पटक जिन्दगीमा धोका पाएकी नायिका शिल्पा पोखरेलको फेरी आयो विबाहको कुरा
फेरी के भयो मिथिलालाई ?
विबाह गरे लगत्तै महाविपत्ति आइपर्यो चर्चित मोडल सारिका केसी
चर्चित नायिका पूजा शर्मा र आकाशको ब्रेकअप भएको हो ?
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई ब्यथा लागेर अस्पताल भर्ना भएको मौका छोपी अर्की युवतीसँग रमाइलो गर्दा भेटीए आयुष्मान
चर्चित नायक आकाश श्रेष्ठकी आमाले पूजालाई फोन गरेर तिमीले मेरो छोरालाई बिगारीदियौँ भनेपछि…
भाइरल सचिन परियारका बाबु कलौटेले फेरी अर्को विबाह गरे
चर्चित नायिका प्रियंका कार्कीलाई ब्यथा लागेर अस्पताल लगियो, आयुष्मान छन् नयाँ सन्तानको स्वागत गर्न पाउँदा खुशीले फुरुगं
नायिका दीपिका प्रसाईको भयो बेहाल !
चर्चित नायिका पूजा शर्माले अन्तत प्रेमी भनिएका निर्माता निर्देशक सुर्दशन थापासँग लकडाउन खुले लगत्तै गरिन् विबाह
विबाह गरेको २७ दिनमा नै प्रा ण त्या गे की विष्णुका सासु र पति प क्रा उ
चर्चित अभिनेता निर शाहको घरमा खल्लबल्ल सुरु भएका बेला बुहारीलाई आकस्मिक अस्पताल भर्ना गरियो
जापानमा रेष्टुरेण्टको शौचालय समेत सफा गरेर संघर्ष गरेकी गौरी मल्लको मनै रुवाउने कथा
पटक पटक जिन्दगीमा धोका पाएकी नायिका शिल्पा पोखरेलको फेरी आयो विबाहको कुरा, शिल्पाले रुँदै राखिन् नयाँ पतिसँग छवीको जस्तो ब्यबहार देखाउन नपाइने शर्त, नयाँ पतिले शिल्पालाई अँगालो हाल्दै भने म पनि तिमी जस्तै पिडित हो शिल्पा अब हामी दुई मिलेर आफ्नो नयाँ संसार सजाउनुपर्छ, हामी अब रुने होइन बाँकी जिन्दगी हाँसेर बिताउनुपर्छ भन्दा भक्कानिइन् सुन्दरी शिल्पा
यि भाइरल बेहुला जसले आफ्नी पत्नि विबाहको मण्डपमा रोएको देख्न नसकी भक्कानिँदै रोए, नरोउ न सानु भन्दै बेहुला यसरी भक्कानिएको पहिलो पटक देखियो, आफ्नी पत्निलाई औधी माया गर्ने बेहुला रोएको दृश्य भिडियोमा हेर्नुहोस्, जुन हेरेपछि तपाईका पनि आँसु थामिने छैनन्
काठमाडौ । नायीका पुजा शर्माले कहिल्यै आफुलाई पिताको अभाव नहुने बताएकी छन् । उनले जुन बेला आफुलाई पिताको सहयोग र सहारा चाहिएको थियो त्यो बेला नपाएको साथ अब नचाहिने बताएकी छन् ।
वुवाले आमालाई तिरस्कार गरेका कारण आमासंग मात्रै बस्दै आएकी पुजाको संघर्षको जिवन छ । पुजालाई आमा एक्लैले हुर्काएकी हुन् । छोरी भएका कारण पुजा र उनको आमालाई परिवारले तिरस्कार गरेको उनले यस अघिका अन्तरवार्तामा बताएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, मलाई बुवाको अभाव महशुष हुँदैन, अस्ती फोन आएको थियो । मैले आवाज सुन्ने वित्तिकै फोन राखिदिए । मलाई कुरा पनि गर्न मन लाग्दैन । मलाई अब चाहिएको छैन । मेरो हातखु्टा सहि सलामत छन् । आफै केही गरेर खान सक्छु । त्यसैले मलाई बुवाको अभाव अहिले छैन । उनले आफुलाई किन फोन गर्नु ? जतिवेला मलाई र मेरो आमालाई परिवारको साथ चाहिएको थियो त्यती बेला पाइएन । उनीहरु अब मलाई चाहिदैन ।
उनले आफुलाई जे काम गर्न पनि हिम्मत लाग्ने बताएकी छन् । त्यो साहस आफुलाई आमाले नै दिएको बताएकी छन् । आमानै आफ्नो जिवन भएकाले आफुलाई आमाले मात्र हेण्डल गर्न सक्ने बताएकी छन् । आमासंग टाढा हुन नपरोस भनेर नै आफुले विवाहका बारेमा अहिले सोच्न नसकेको बताएकी छन् ।
उनले सकेसम्म धेरै समय आमासंगै बिताउन चाहेकै कारण विवाह पनि ढिलो गर्ने सोच बनाएको बताएकी छन् । कता कता डर लाग्छ विवाह गरेर जाने घर कस्तो पर्ने हो ? आमालाई हेर्न पाउँछु की पाउँदिन यो सबै कुरा सोचेर पनि विवाहको बारेमा सोच्न सक्दिन ।